BBC dalka faransiiska,Nin wasiir iska dhigay oo malaayin lacag ah dhacay | Biyoguurenews.com
Home Wararka BBC dalka faransiiska,Nin wasiir iska dhigay oo malaayin lacag ah dhacay
BBC dalka faransiiska,Nin wasiir iska dhigay oo malaayin lacag ah dhacay
Sheegashada magaca beenta ah ayaa noqday dambi si aad ah dunida ugu soo badanaya, balse arrinta lala yaabay ayaa waxay noqotay nin sheegtay inuu yahay wasiirka gaashaandhigga Faransiiska.
Dabayaaqadi 2015-kii shaqsi iska soo dhigay wasiirka gaashandhigga Faransiiska, Jean-Yves Le Drian, aya dhacay lacago gaaraya $90 milyan oo doolar.
Waxayna lacagahaasi ka dhaceen shariikadaha Aga Khan iyo Milkiilaha shirkadda khamriga soo saarta ee Château Margaux.
Lacagtana wuxuu shirkadaha iyo shaqsiyaadka uu kaga qaatay xiriir uu la soo sameeyey isaga oo u sheegay inuu yahay Mr Le Drian, oo uu lacagtaasi u doonaya inuu madax furasho u siiyo wariye ay haystan koox islaamiyiin ahBalse lacagti lama siinin kooxda la sheegay iney wariye qafaalasho ku haystan, lacagtiina waxay ku dhacday akoonka uu shaqsi ahaan u lahaa Jean-Yves Le Drian.
“Sheekadan iyo sida ay u dhacday ayaa ah mid ka duwan sheekooyinka been abuurka oo horay u dhici jiray”, ayuu yiri Delphine Meillet oo hadda ah wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska.
“Wasiirka Faransiiska ee hadda shaqeynaya waxa uu yiri tillaabbooyin lagu ogaanayo ciddi been abuurashadasi ka dambeysay ayaan qaadnay. Waxaanna isugu yeernay madaxdi ay quseeysay si aan u ogaanno lacagtaasi faraha badan uu ninka lunsaday iyo cidda ay lacgahaasi ka maqan yihiin.Wixi ka horreyey 2012-ka Mr Le Drian wuxuu ahaa siyaasi ka tirsan xisbiga hantiwadaagga Faransiiska.
Arrintan waxaa hadda gacanta ku haya hay’adaha sharciga ee dalka Faransiiska, waxaana shakiga ugu badan laga qabaa nin fannaan caan ah oo ka soo jeedo Israel oo lagu magcaabo Gilbert Chikli.
Wuxuuna hadda uu ku jiraa xabsi ku yaalla Faransiiska isaga oo horay looga soo wareejiyay dalka Ukrain oo ahayd meeshii uu dadka ku dhacayay, isaga oo horay looga soo oogay dacwad la xiriirta inuu galay dambiyo la xidhiidha been abuur iyo sheegasha qof uusan ahayn.
Chikili, oo asal ahaan ka soo jeeda Yahuudda Tuuniisiya wuxuu ka shaqeeynayey Belleville oo ku taallo waqooyiga magaalada Paris.
2015-kii Chikili, ayaa lagu helay dambi ah inuu si sharci darra ah uu lacag uga gudbiyey Faransiiska isaga oo lacagtana ka khiyaamay nin madax u ahaa.
Sida ay dambi baarayaashu sheegeen, wuxuu tallabbada ugu horreysay ee sheegashada qof uusan ahayn uu ka billaabay lacag uu ka dalbaday dowladda Tuuniisiya oo ahayd iney bixiso lacagaha diyaaradaha helikoobtarka noocooda Tiger loo yaqaano oo ay Faransiiska horay uga amaahatay.
Balse arrinta la yaabka leh ayaa noqotay markii ay xukumadda Tuniisiya sheegtay inaan lagu lahayn wax lacag ah isla-markaana ay jirin diyarado ay ka amaahatay Faransiiska.
Heshiisyo kale oo uu ninkaasi saxeexay inta uu wasiirka beenta ah uu ku shaqeysanayey ayuu ku helay malaayiin Yuuro, balse heshiisyadaasi inta aysan meelmar noqon ayaa lagu ogaaday inuu ninkaasi adeegsanayo magac been ah iyo xil uusan hayn.
Kaddibna falalkii caadada u ahayd markii lagu fahmay dalka Ukraine wuxuu u wareegay dalka Faransiiska isaga oo garab ka helay saaxibbada uu Faransiiska uu ku lahaa.
Ms Meillet, waxay sheegtay inuu ninkaasi si isdaba joog ah uu u wici jiray madaxda waddamada qaaradda Afrika, kuwa Kaniisadaha iyo Hay’adaha Samafalka oo ay ka mid thay hay’adda Sidaction
Shabakadda faldambiyeedka been abuurka sameeysay waxay howshooda ka billaabeen wicitaanno dhinaca teleefanka oo ay sameeynayeen shaqsiyaad la shaqeynayey Mr Le Drian oo ka mid ahaa la taliyihiisa gaarka ah Jean-Claude Mallet.
Ninkani wuxuu u gogol xadhay sidii uu Mr Le Drian wadahadal toos ah uu ula yeelan lahaa wasiirka saxda ah laftiisa.
Xiriirki taleefannada ka billaawdayna wuxuu u sii gudbay heer ay farriimo muuqaallo ah ay isdhaafsadaan dhinacyada xiriirka sameeyanayo.
Ninka wasiirka beenta ah sheegtay Le Drian magaca wasiirka gaashaandhigga Faransiiska oo keli ah ma adeegsaneyn balse magaciisa saxda ahna wuu adeegsanayay.
Shirarka tooska ah uu la yeelanayo dadka uu la xiiriirayo wuxuu u soo xiran jiray maaskaro wajiga wasiirka gaashaandhigga Faransiiska.
Wuxuuna qalabeystay xafiis la mid ah kan uu wasiirka fadhiisto wuxuuna xafiiska suray calanka dalka Faransiiska, sawirrada shaqsiyaad caan ah iyo kan Madaxweyne François Hollande.
Booliska ayaa waxay ku raad joogaan shaqsiyaadkii shabkaddaasi ka midka ahaa.
Ms Meillet ayaa waxay ka mid tahay shaqsiyaadka ay lacagaha badan ka dhaceen kooxdan uu hoggaaminayey ninka sheegtay wasiirka gaashaandhigga Faransiiska.
Aga Khan waxaa lga dhcay €18 milyan oo Yuuro, sida oo kalana ganacsade u dhashay Turkiga oo aan magaciisa la sheegin ayaa laga dhacay lacago malaayiin doolar ah.
Shaqsiyaadka dabinka kooxdaasi ku dhacay waxaa ka mid ah madaxweynaha Senegal Macky Sall.
Ugu dambeynti, bishi August 2017 ayaa Chili gacanta lagu soo dhigay, xilliga lagu qabtay Airboorka wuxuu sheegay inuu arrima cibaado uu socday balse taleefankiisa marki la baaray yaa waxaa la ogaaday inuu iibsan rabay maaskaro kale oo howlihiisa uu ku sii wado.
Waxayn booliska Faransiisku sheegeen iney rumeysan yihiin dadka falkaasi ku lug lahaa iney badan yihiin isla-markaana ay kooxdu gacmaha kula jireen dambiyo ay ka mid ahaayeen fal dambiyeedyo kale oo ka dhacayey dugsiyo ku yaalla Faransiiska.
Previous articleXiriir miyaa ka dhexeeya darawalada baabuurta xamuulka ee Soomaalida iyo guurka badan
Next articleWAR DEG DEG AH: Madaxwaynaha Somaliland OO Sameeyay Xil Ka Qaadis Iyo Magacaabis.